Nhau - China nyowani yepurasitiki pombi indasitiri ine inokurumidza kukura chiyero pasirese
China nyowani epurasitiki pombi indasitiri ine inokurumidza kukura chiyero pasirese
Kubva 2000, China yepurasitiki pombi kugadzirwa inosvika pechipiri pasirese. Muna 2008, China yakazara kubuda kwepombi dzeplastiki yakasvika matani emamiriyoni 4.593. Mumakore gumi apfuura, epurasitiki nyere indasitiri muChina kwakasimbiswa nokukurumidza. Kuburitswa kwakawedzera kubva pamatani mazana maviri ezviuru muna 1990 kusvika pamatani mazana masere ezviuru muna 2000, uye yakachengetedza huwandu hwegore negore hwekukura hunosvika gumi neshanu muzana.
Iwo ekudzika kwekushandisa kweHDPE epurasitiki zvigadzirwa zvinonyanya kusanganisira mapombi ekunze emvura ekunze, mapaipi evhu akavigwa, pombi dzejekete, kuvaka mvura yekupa uye mapaipi ekudhirowa, nezvimwe. Zvizhinji zvekushandisa kwakadzika kunoenderana zvakananga kana zvisina kunangana neindasitiri yezvivakwa. Dhata dzakasarudzwa mugore 2000-2008 Mukuongorora, takaona kuti paine kuwirirana kwakasimba pakati pekambani yepurasitiki pombi nenzvimbo yakapera nzvimbo.
平均 Ivhareji yekukura kwehuwandu hwePPR uye PE mapaipi epurasitiki mune ramangwana ichave yakakwirira kupfuura iyo indasitiri yepombi: Parizvino, mazhinji epasi rese epombi epurasitiki yezvinhu zvakasiyana siyana uye zvivakwa zvakagadzirwa nekuiswa muChina. Mumazuva ekutanga, kwaive nemapepa epurasitiki ePVC muChina. Aive anonyanya kushandiswa pombi dzemagetsi waya nemapombi etsvina. Nekudaro, pombi dzePVC dzine zvimwe zvikanganiso maererano nekushomeka kwechando, kupisa kupisa, uye simba. Mwero wekukura kwemusika unenge wakadzikira pane uya wepombi dzepurasitiki (kusanganisira PPR). , PE, PB, nezvimwewo), iyo yekukura mwero nyowani yepurasitiki pombi indasitiri yapfuura 20%, inova nzira yekuvandudza yeChina yepurasitiki pombi.